Bologna, ịgagharị n'obodo nke ihe ọmụma | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Bologna, Ihe ị ga-ahụ
Otu n'ime ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-ekwo ekwo na Italytali, nke ọrụ ndị na-ejikọ mba niile na-agafe ma gafere, bụ Bologna. Ọ dị n'ebe ugwu, ọ bụ ya isi obodo nke ọgaranya Emilia-Romagna na o nwere ogologo akụkọ na-atọ ụtọ nke hapụụrụ imirikiti ụlọ ya na omenaala ya.
Ọ bụrụ n ’ị na-ahazi njem Itali, ana m adụ gị ọdụ ka ị ghara ịhapụ ya. Amaara m na Florence, Venice ma ọ bụ Rome bụ ebe ndị mara mma karị, mana ọ bụrụ na ịnọ ụbọchị ole na ole na Bologna, a ga-akwụghachi gị ụgwọ. Ọ bụ obere obodo ị nwere ike iji ụkwụ chọọ, na-enye gastronomy dị ezigbo ụtọ na ohere magburu onwe ya iji gaa ịzụ ahịa na ịmịkọrọ ọdịbendị ya.
1 Bologna, ndị Mụtara
2 Ebe nkiri kacha elu na Bologna
3 Bologna Nnabata Kaadị
4 Ndụmọdụ maka ịga Bologna
Bologna, ndị Mụtara
Nke a bụ otu esi akpọ obodo ochie a. La Docta ma ọ bụ La Dotta, mana ha na-agwakwa ya Rossa y Ndị Grassa, nke ahụ bụ, na-acha uhie uhie na Abụba. Ọ bụ onye ahụ mụtara n'ihi na nwere mahadum kasị ochie na Europe, Ọ bụ Red n'ihi na ejirila brik nke agba ya wuo ọtụtụ ụlọ ya nke mere na ebe akụkọ ihe mere eme nwere ụda ahụ, ọ bụkwa Griiz n'ihi na gastronomy ya bụ akụkọ mgbe ochie na nri ndị nwere anụ na ude na-emetụta ya. Onyinye.
Echere m na otu n'ime atụmatụ atọ a nke obodo ahụ na-arụ ọrụ dị ka ndị njem nleta, nri? Akụkọ ihe mere eme na-agwa anyị na mgbe ọdịda nke Alaeze Ukwu Rom dara, obodo ahụ ghọrọ oke ala iyi egwu oge niile site n'aka ndị na-eme ihe ike ruo mgbe ọ dara n'okpuru ọchịchị Lombard. Mahadum tọrọ ntọala ọtụtụ narị afọ mgbe e mesịrị, na 1088, ma mara ka esi enwe n'etiti ụmụ akwụkwọ ya Dante, Bocaccio na Petrarca.
Ka ọ na-erule narị afọ nke iri na abụọ mmadụ bi n'etiti mmadụ iri ise na iri isii, dị nnọọ ọtụtụ maka obodo ochie. Ọdịdị nke ọwa mmiri ya dị mgbagwoju anya na nke dị elu bụ ọgụgụ isi nke oge ụgbọ mmiri na-eji textiles emepụtara na ya eme njem. Ezinụlọ ndị bara ọgaranya wuru ụlọ elu ụlọ ha, ọtụtụ narị, na n'okporo ámá ndị mmadụ jikọtara na mgbakwunye na chọọchị, ebe obibi na ọtụtụ ụlọ ọha.
Ihe otiti site na Bologna ruru narị afọ nke iri na asatọ na mẹ ndu Napoleon. Mgbe e mesịrị, ọ gbakọtara Papal States na n'ikpeazụ ghọrọ akụkụ nke Alaeze oftali na ngwụsị narị afọ nke XNUMX. O mebiri nke ukwuu n'oge Agha Worldwa nke AbụọN'ihi mkpa nke ọdụ ụgbọ okporo ígwè ya, n'ihi ya, bọmbụ ikuku ahụ bibiri ọtụtụ n'ime ebe akụkọ ihe mere eme ya.
N'iburu ozi nkenke a n'uche ugbu a anyị nọ n'ọnọdụ iji debanye aha gị ihe ị na-agaghị atụ uche na Bologna. Rịba ama!
Ebe nkiri kacha elu na Bologna
El Palazzo Poggi A na-agụ ya n'etiti ha: ọ bụ isi ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ nwere ebe ngosi ihe mgbe ochie ya. N'obí ahụ malitere na narị afọ nke XNUMX ma nwee ọrụ nkà n'ebe niile. N'ihe banyere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, o nwere nchịkọta dị mkpa nke wax anatomical na obstetric, ihe mgbe ochie dị ebube, mana enwekwara nchịkọta akụkọ ihe mere eme, optics na eletriki, ọdịdị ala na sayensị.
El International Museum na Music Library O nwere ihe odide nke otu nwa okorobịa Mozart yana ngwa ọrụ. Na Ihe ngosi ihe mgbe ochie nke onye agha Nwere ndị agha egwuregwu ụmụaka ji akwụkwọ, ọla, stucco, plastik na osisi mee, mpempe dị ebube. Na Ihe ngosi nka ihe ochie Industrial O nwekwara ọtụtụ akụrụngwa akụkọ ihe mere eme na imepụta silk textiles, igwe hydraulic nke rụrụ ọrụ site na XNUMX ruo XNUMX narị afọ.
El Museumlọ Ahụ Ike ọ bụkwa ihe na-akpali mmasị nleta. Mgbe ahụ i nweelarị ebe ngosi nka mgbe ochie na veranda dị ka Pinacoteca Nacional, na Archaeological Civic Museum, Medieval Civic Museum, na Nchịkọta Ọha Obodo, nke Ebe Morandi Museum, nke Ebe ngosi ihe nka nke oge a, nke Ebe obibi ọha na eze nke Renaissance na Ebe Ebraico Museum. Akụkọ ihe mere eme nke obodo dị na A na -akpọ ya Pepoli, isi ụlọ ọrụ nke Ducati Ha nọ n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụgbọ ala a. E nwekwara Museumlọ ihe nkiri nke Tapestry na e nwere na-atụ aro ihe ngosi nka ma ọ bụrụ na-amasị gị Agha nke Abụọ: na Grigoverde Museum. O nwere ihe nlere multimedia ise ebe ị na-eche na ọ bụ akụkụ nke ọdachi agha.
Ọ bụrụ na-amasị gị ụka na ebe obibi ndị mọnk e nwere Museum nke San Petronio, Museum nke Katidral na akụ ya, nke Museo di Santo Stefano, ebe obibi ndị nọn Benedictine nwere frescoes na mgbe ochie, nke San Domenico na nke ochie monastery nke San Giovani na Monte. N'ezie enwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie nke mere ị kwesịrị ịdepụta ndepụta nke ihe ndị masịrị gị ma kpochapụ ụfọdụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ọtụtụ ma ị nwere obere oge.
Bologna na-enye anyị ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, veranda art, ochie chọọchị, nkà mmụta ihe ochie, nkà mmụta ihe ochie, ụlọ akụkọ ihe mere eme na obí eze, isi iyi, àkwà mmiri, ọwa mmiri, ụlọ elu, ụlọ mgbịrịgba na ụzọ akụkọ ihe mere eme iji chọpụta. Ije ije n'etiti obodo ị ga-abanye n'ime mara mma Isi iyi Neptune, site na narị afọ nke XNUMX, ọrụ Giambologna na Isi mmiri Vecchia, site n'aka otu onye edemede ahụ.
Anyị kwuru na nke ahụ Bologna bụ obodo chanal Yabụ na ọ bụ: enwere ọtụtụ ọwa na n'etiti ha ị nwere ike ịgbaba n'ime kanaal delle Moline na Navile ọwa nke bụ narị afọ asaa isi ụzọ mbata nke Oké Osimiri Adriatic. Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ bụrụ na e nwere ọwa, enwere akwa mmiri, yabụ ịga ije ị ga-agafe ụfọdụ. Ana m ekwusi ike ije a n'ihi na Bologna bụ obodo iji chọpụta n'ụkwụ n'ihi ya, ọ na-enye ọtụtụ trekking ụzọ gasị inyocha ya.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị gaa na Ọktoba Bologna na-ahazi njegharị na-eduzi n'efu n'okpuru mmemme trekking nke Urban. Ọ na-abụkarị izu ụka na karịa 30 eduzi njem nke obodo. Ọ bụrụ na ị na-aga n'oge ọzọ nke afọ, ị nwere ike ịdebanye aha maka njem obodo: njem obodo na-agba ụgbọ ala na-enweghị ụlọ, na-agagharị n'ugwu ndị gbara obodo ahụ gburugburu n'etiti March na June na n'etiti September na November, njem na obere ụgbọ oloko. - ụgbọ ala na-agafe ihe ngosi akụkọ ihe mere eme niile nke obodo ma ọ bụ njegharị abalị.
Bologna Nnabata Kaadị
Obodo nwere nke ya kaadị njem nleta. Ọ nwere ndaba nke Oge 48 ma na-efu euro 20. Na-eje ozi maka okenye na nwatakịrị na-erubeghị afọ iri na abụọ. Gụnyere na free ntinye 10 ngosi ihe mgbe ochie, a obodo map n'asụsụ asatọ nwere ụzọ njem pụrụ iche ịme n'ime awa atọ, ego na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na ụlọ ahịa na ohere nke ịhọrọ njem elekere abụọ na-eduzi nke etiti akụkọ ihe mere eme, tiketi 24 maka ụgbọ ala iji kwaga ụbọchị dum n'ụzọ na-akparaghị ókè ma ọ bụ tiketi iji gaa ọdụ ụgbọ elu Marconi.
Nwere ike ịzụta kaadị a na ebe ndị njem nleta: na Piazza Maggiore ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ elu Marconi n'onwe ya, kamakwa na hotels.
Ndụmọdụ maka ịga Bologna
Oge kachasị mma nke afọ iji gaa obodo a bụ na oge opupu ihe ubi ma obu na ada n'ihi na ihu igwe dị ọkụ ma ọ bụghị egwu ma dịka a ka nwere ndị mahadum, enwere ọtụtụ ndụ n'okporo ámá. Ee ị nwere ike zere ọnwa nke August n'ihi na okpomoku na-emenye ndị mmadụ ụjọ ma ha na-aga n'oké osimiri, na-emepụta obodo tọgbọrọ chakoo.
Ọ bụrụ na-amasị gị sirima i nwere ike ime ka ọbịbịa gị idako na ememme nke Il Cinema Ritrovato, n'oge ọkọchị, n'ihi na a na-etinye ihe nkiri n'èzí ma na-atụgharị ihe nkiri na kpochapụwo na isi. Ọ bụrụ n’ịji ụgbọelu rute, aga m agwa gị na ụgbọ ala dị n’etiti ọdụ ụgbọ elu Marconi na obodo ahụ. E nwere Aerobus nke na-eme njem ahụ naanị nkeji 20 ma na-efu ihe ruru euro 5, karịa ma ọ bụ obere. Ọ tụlee gị n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na tiketi nwere ike zụrụ na igwe ma ọ bụ n'elu ụgbọ ala.
Site n’ọdụ ụgbọ elu nke ọzọ, Forlì, bọs ahụ na-ewe otu elekere ma na-efu obere ihe wee hapụ gị ọdụ ọdụ bọs, n’akụkụ ọdụ ụgbọ oloko. Ha abuo bu ije ije nke iri site na etiti obodo. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị rute n'ụgbọ okporo ígwè site n'akụkụ ndị ọzọ nke 10tali 48 awa n'obodo ahụ ga-ahapụ gị ihe ncheta magburu onwe ya: nri ndị mara mma, ụfọdụ ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie, na-agafe ọwa mmiri, biya biya oyi n'oge ọkọchị na ụfọdụ ịzụ ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Bologna » Bologna, a ije site na obodo nke ihe ọmụma